Misaotra, Dorion Carroll ary Technorati! | Martech Zone
Misaotra, Dorion Carroll ary Technorati!
Oh ny mahatsikaiky! Vao avy nahavita nanoratra lahatsoratra aho omaly ny fanjakana marika ary ny fomba fanalahidin'ny mpiasa tsirairay amin'ny ezaka ataonao amin'ny marika. Tokony ho 6 volana lasa izay dia nanana olana aho Technorati tsy manavao ny statiko. Nanoratra mailaka iray ho an'ny fanohanan'izy ireo aho ary tao anatin'ny herinandro na roa, nahazo valiny feno fahasoavana aho ary fanavaozana fa voahitsy ny olana.
Izany no fiheverana voalohany lehibe. Tsy 'mandoa' Technorati aho ka tsy nanantena valiny na zavatra hafa ho setrin'izany. Hatramin'izay dia mpankafy aho ary nahita fomba mahafinaritra vitsivitsy hampiasana Technorati hanatsarana ny kalitaon'ny bilaogiko sy handrefesana ny fitomboana, ny fahefana ary ny laharan'ny bilaogiko.
Roa andro lasa izay, izaho namoaka amin'ny fahaizan'ny fikarohana bilaogy Technorati. Iray amin'ireo mpamaky ny bilaogiko, Vince Runza, naneho hevitra momba ilay lahatsoratra sy ny fomba nahazoany olana tamin'ny Technorati manavao ny bilaoginy. Amin'ny alàlan'ny herin'ny tontolon'ny bilaogy sy amin'ny maha mpiasa Technorati azy Dorion Carroll mametraka izany, "olona, ​​miresaka amin'ny olona, ​​ary mailaka kely (mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy)"… tonga tamin'i Dorion ilay hafatra izay nanamafy fa voavaha avy hatrany ilay olana.
Ny fizarana iray manontolo dia tsy afaka nandoko sary mazava kokoa ho an'ny lahatsoratro. Talohan'ity olana ity, ny 'fahitana' ny marika Technorati dia ny tranokalan'izy ireo, ny sary famantarana ary ny loko maitso:
Fantatro izao fa misy mpiasa mazoto manaraka ny Technorati izay miahy izay lazain'ny olona momba ny orinasany; noho izany, ny marika nomen'izy ireo. Ny zavatra tsotra dia tokony ho tsy niraharaha fotsiny ny fidirana ireo mpiasa ary 'avelao ny mpanohana hitantana azy'. Tsy izany no zava-nitranga ary miresaka be amin'ny marika Technorati izy io. Technorati dia mihoatra ny "Search Engine", orinasa manandrana manampy ny bilaogera hihatsara.
Misaotra, Dorion. Misaotra, Technorati.
Fanampiana marika: ny fanjakan'ny marika
30 Desambra 2006 à 10:56
Mihainoa, mihainoa! Talanjona aho fa haingana be ny valiny. Nampanantena azy aho, tao amin'ny bilaoginy, fa tsy hanakorontana azy amin'ny olana rehetra momba ny fanohanana ara-teknolojia ho avy. Tsy fisaka fotsiny izao tontolo izao fa haingana kokoa koa!